Iza moa io isika io? - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Iza moa io isika io?
Raha novakiantsika ilay soratra masina teo aloha teo dia ilay ao amin‟ny ohabolana 8: 22- 30 dia milaza mazava tsara ilay izy, fa efa mpita-marika teo anilan‟ny Ray i Jesosy Kristy, ary fony mbola tsy hary izao rehetra izao dia efa Izy no efa voalohany noharina teo. Ka raha hoy Izy hoe: “andeha sika hamorona olona tahaka ny endritsika”, dia mazava ho azy fa teo aloha izany Jehovah Andriamanitra ilay Mpamorona izao tontolo izao, fa teo ihany koa ity nolazaina fa noforonina na noharina voalohany indrindra talohan‟izao zavatra rehetra izao dia ilay milaza hoe mbola tsy hary akory i Abrahama dia efa teo aho, dia tsy iza akory izany fa dia i Jesosy Kristy no niaraka namorona ity olombelona ity, ka nataony tahaka ny endriny. Ka raha hiverenantsika ary izay voasoratra tao amin‟ity Jaona ity dia
Jaona 1:1–4 «1 Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. 2 Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. 3 Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. 4 Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona. »
Izany hoe Andriamanitra izany dia nisy teny tao anatiny, ary ny teny ao anatiny no miteny namoronana izao tontolo izao, ary ao anatin‟Andriamanitra dia misy fanahy, ka isika olombelona dia noharihana tahaka azy. Izany hoe isika olombelona izany dia misy vatana iray, dia misy teny ao anatintsika, ary misy fanahy ato anatintsika ato. Ny ohabolana Malagasy aza dia milaza hoe “ny fanahy no maha olona” ihavahana amin‟ny biby. Dia mazava fa ny vatatsika dia iray, fa isika miteny ary isika manana fanahy.
Nahoana isika no manana vatana sy misy teny avy ato anatintsika?satria nohariana tahaka an‟Andriamanitra isika, ka io Andriamanitra io izany dia misy Vatana, misy Teny, ary misy Fanahy. Ka ilay hoe tamin‟ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin‟Andriamanitra, dia izao izany no dikany hoe: Andriamanitra izany no niteny tao aminy, ary tao aminy ny teny tamin‟ny voalohany. Ary io teny io hoy izy dia Andriamanitra : ohatra raha miteny ohatra i Pastera Mailhol dia midika izany fa ny teny izay renao dia midika hoe i Pasitera izany miteny izany. Ka raha Andriamanitra no miteny dia midika hoe: Andriamanitra io teny henonao io. Ary io teny izay notenenin‟i Jehovah io, dia io no nahariany izao zavatra hary rehetra izao. Dia ho jerentsika manaraka ny hoe: ny teny no nahariana ny zavatra rehetra nefa i Jesosy Kristy ihany koa efa teo, ary Izy no mpita-marika teo anilan‟ny Ray sy namoronana izany rehetra izany.
Jaona 1:1–3 «1 Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. 2 Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. 3 Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza.»
Misy olona mandray azy ity ohatra izao: Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. Oharin-dry zareo amin‟ny hoe: misy trano ,hono, izany, ka Andriamanitra, hono, izany, dia manao ny trano ka ny teny hono izany dia sahala ny olona mipetraka ao anaty trano.
Fa mazava be ny soratra eto, fa tsy ao anaty trano izany no misy ny teny, ohatra raha miteny aho izao dia ny teniko ato anatiko ato, fa tsy hoe ato anaty trano ny teniko ka apetraka ao anaty” berceau” aloha dia tafiana lamba ao, ka rehefa hiteny aho dia alaina indray ilay teny dia ampidirina aty anatiko, dia izay aho vao afaka miteny!!, tsy izay ilay izy fa sahala amintsika izao, rehefa hiteny dia efa ato anatintsika ato ilay teny, fa tsy hoe: rehefa hatory isika dia misaraka amintsika ny teny. Ka ilay teny izany rehefa tiantsika ampiasaina ilay izy, dia miasa avy hatrany. Io teny io hoy izy no naharina izao zavatra rehetra izao, ary raha tsy ny teny hoy izy, dia tsy nisy hary izao rehetra izao. Ahoana indray hoy izy ao amin‟ny andininy faha 14
Jaona 1:14 « Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina* tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. »
Izany hoe ilay teny tao amin‟Andriamanitra io izany, dia noforoniny nataony ho tonga nofo dia tonga tety amintsika. Ka ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe: ovina ary io teny io no noforonina natao ho tonga nofo, ary oviana izy io no efa olombelona, na ihany koa hoe zava-boahary efa mananan‟aina nipetraka tany an-danitra tany no nalefa tety? Efa talohan‟ny namoroana izao tontolo izao ve sa mbola taty aoriana.
Raha mijery isika ny voalaza tany amin‟ny genesisy dia izao no voalaza tao:
Andeha isika hamorona olona tahaka ny endrik‟isika. Ary raha vakiana indray izay voalaza tao amin‟ny ohabolana, dia hoy izy hoe: mbola tsy noharina akory izao rehetra izao sy ny zavatra rehetra eo aminy dia efa Izaho no noharina voalohany. Dia mazava ho azy izany fa ity teny ity dia efa nohariana talohan‟ny namoronana izao tontolo izao, ka afaka niaraka tamin‟Andriamanitra, ka nanao hoe andeha ary isika. Iza ilay isika?, tsy iza fa ilay teny io izany, izay efa noharina ho tahaka ny olona, andeha isika hamorona ny olona tahaka ny endrik‟isika, izany hoe misy loha, misy tanana, misy vatana, misy tongotra, misy maso, misy vava, sns. Ka ilay isika resahina eto dia izay voalaza ao amin‟ny ohabolana toko faha 8
Ohabolana 8:22 – 30 «22 Jehovah nahary* ahy ho fiandohan’ny alehany, Ho voalohany amin’ny asany hatramin’ny taloha.
23 Izaho notendreny hatramin’ny fahagola, Eny, hatramin’ny voalohany indrindra, dia fony tsy mbola ary ny tany. 24 Fony tsy mbola ary ny lalina, no efa teraka aho, Fony tsy mbola ary ny loharano miboiboika be, 25 Fony tsy mbola naorina ny tendrombohitra, Fony tsy mbola nisy havoana, no efa teraka aho, 26 Fony tsy mbola natao ny tany, na ny saha, Na ny voalohan’ny vovo-tany ambonin’izao rehetra izao. 27 Raha namorona ny lanitra Izy, dia tany aho, Raha namaritra ny hababakaka tambonin’ny lalina Izy, 28 Raha nampitoetra ny rahona eny ambony Izy, Raha niboiboika fatratra ny loharanon’ny lalina, 29 Raha nanisy faritra ho an’ny ranomasina Izy, mba tsy hahazoan’ny rano mihoatra ny fetrany, Ary nandidy ny amin’ny fanorenan’ny tany, 30 Dia mpità-marika* teo anilany aho sady ravoravo isan’andro isan’andro Ka nilalao mandrakariva teo anatrehany;[Na: notezaina] »
Izany hoe ilay teny izany no efa nisy hatramin‟ny voalohany, fa rehefa avy eo io teny io, dia nahariana ny zavatra rehetra, ka dia mifandrindra tsara aloha izany rehetra izany. Fa rehefa avy eo io teny io dia nataony ho tonga nofo ka nonina teto amintsika, raha hiverenantsika ary ilay sary triangle teo dia Ilay boribory io izany, dia nivoaka tao anatin‟ilay telozoro teo. Ka izy io rehefa mbola teo amin‟Andriamanitra dia misy “pouvoir”, sy fahefana, ka rehefa nivoaka tao izy, dia mivoaka miaraka aminy ny fahefany sy ny heriny ary ny voninahiny. Io teny io rehefa nivoaka tao amin‟Andriamanitra, dia noharina tahaka ny olombelona talohan‟ny zavatra rehetra. Dia andeha anie isika hijery, fa io Jesosy Kristy io rehefa tonga tety ambonin‟ny tany, dia noharina tahaka ny olona rehetra izao, dia mitovy amin‟ny olombelona rehetra koa, fa izy io izany tany amboalohany dia tenin‟Andriamanitra izay nohariana natao ho tonga olona. Ahoana no fomba nanaovany azy?
Mbola ho hitantsika rehefa avy eo izany, fa ny mpaminany dia efa nilaza azy io hatrany ampiandohana. Fa rehefa ho teraka i Jesosy Kristy dia hitantsika ny Soratra Masina, fa i Maria virjina no bevohoka, nefa mbola tsy nahalala lahy (zazavavy mbola madio). Any ka na dia i Josefa fofom-badiny izay hanambady azy aza, dia saika nikasa ny hametraka azy mangingina, satria lasa saina izy fa hoe : mbola tsy niaraka akory izy ireo na nanao firaisana, kanefa Maria efa bevohoka sahady !!, fa angamba io tena ho nijangajanga mihitsy hoy izy. Tena nofitahin‟io vehivavy io aho ka dia hialako mangingina io. Fa ny anjely no nilaza tamin‟i Josefa hoe « aza matahotra ny ampakatra an’i Maria vadinao fa ny zaza ao ankibony dia avy tamin’ny Fanahy Masina.”
Matio 1:18-21 «18 Ary ny nahaterahan’i Jesosy Kristy dia toy izao: Rehefa nanaiky Maria, renin’i Jesosy, ho fofombadin’i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin’ny Fanahy Masina izy. 19 Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy ta-hanala baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. 20 Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin’ny Tompo niseho taminy tamin’ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak’i Davida, aza matahotra hampakatra an’i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin’ny Fanahy Masina, 21 ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy*; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany. [*Jesosy = Jehovah no Mpamonjy] »
Rehefa nitranga izay zavatra izay, dia nanaiky ihany i Josefa; izany hoe : ilay teny io dia nentin‟ny Fanahy Masina navadika ho « foetus », dia nentin‟ny Fanahy Masina nataony ho tonga olona tao an-kibon‟i Maria. Dia rehefa tonga tao izy dia nitombo ary dia nateraka. Ka tsy avy tamin‟ny firaisan‟ny mpivady no nahatonga azy io, satria masina izany Fanahy Masina izany, ka dia vehivavy virjina no nataony hitondra izany. Ka io teny tonga nofo io dia maty tany aoriana, ary mbola hiverenantsika avokoa izany ao aoriana. Fa rehefa avy niasa tety ambonin‟ny tany io teny io, dia maty ka niakatra any an-danitra indray.
Ka inona ny zavatra nitranga rehefa niverina nankany an-danitra Izy? Na ihany koa hoe nankaiza izy?. Dia ny baiboly ihany izany no mamaly sy milaza, fa ny toerana nialany ihany no tsy maintsy hiverenany:
Jaona 16:28 – 30 «28 Eny, nivoaka avy tamin’ny Ray Aho ka tonga amin’izao tontolo izao; ary hiala amin’izao tontolo izao indray Aho ka hankany amin’ny Ray. 29 Hoy ny mpianany: Indro, milaza tsotra Hianao ankehitriny, fa tsy manao fanoharana akory. 30 Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra Hianao ka tsy mitady olona hanontany Anao; izany no inoanay fa nivoaka avy tamin’Andriamanitra Hianao. »
Nilaza izany i Jesosy Kristy sy ny mpianany eto, ary miara-manaiky fa nivoaka avy tamin‟Andriamanitra tokoa i Jesosy Kristy, ka mbola hiverina any amin‟Andriamanitra indray Izy avy eo.
Ka inona ary io hoe nivoaka avy tamin‟Andriamanitra io?
Io ilay TENY fa ny mpiara-monina aminy moa ve mahalala!!, satria tovolahy kely niara-nipetraka taminy teo, niara-nilalao, nifanerasera maraina sy hariva teo no (niara nanao kapsily, nanao zoera, nilalao kanety, nanao baolina, nanao fanenjika,sns), dia vetivety teo dia nilaza fa hoe: Izaho sy ny Ray dia iray ihany, Izaho dia nidina avy tany ambony nidina tetyan-tany.
Ka rehefa tany izy, talohan‟ny nidinany tety an-tany, ahoana no ilazan‟ny baiboly ny toerana nisy azy?, ary rehefa niverina niakatra any an-danitra indray izy dia aiza indray no toerana ilazan‟ny baiboly azy?
IZA MARINA MOA ITY JESOSY KRISTY ITY?
Ny toerana nisy azy talohan’ny nidinany teto ambonin’ny tany